Madaxweyne Siilaanyo muxuu ka yidhi faa’idada ay Somaliland u leedahay Heshiiska Ankara | Salaan Media
Madaxweyne Siilaanyo muxuu ka yidhi faa’idada ay Somaliland u leedahay Heshiiska Ankara
Hargeysa (SM)- Madaxweynaha Somaliland Mudane Axmed Maxamed Maxamuud (Siilaanyo), ayaa caawa ka hadlay heshiiska Somaliland iyo Soomaaliya caawa ku kala saxeexdeen Magaalada Ankara ee dalka Turkiga.
“Waxa heshiiskan looga wada shaqaynayaa sidii kuwii horeba looga wada shaqaynayay. Waxa laga wada shaqaynayaa wixii danaha maslaxada mandaqada ku saabsan sida budhcad badeeda iyo wixii waxyeelaya in lala wada dagaalamo oo meel looga soo wada jeedsado ayaa loo baahan yahay,”ayuu yidhi Madaxweynaha Somaliland oo u waramayay laanta Afsoomaaliga ee VOA-da.
Madaxweynaha oo la weydiiyay su’aal ahayd waxa faa’iido ah ee ugu jirta Somaliland wada hadaladan maadaama oo aan kulankii sadexaad Somaliland iyo Soomaaliya lagu soo qaadin qadiyada Somaliland, waxaanu madaxweynuhu yidhi “Faa’iidada ugu jirtaa Somaliland waxa weeye caalamkii ayaa Somaliland mowqifkeeda ogaanaya, waxaanay mar walba fursad u helaysaa inay u cadayso mowqifka ay taagan tahay oo aan ahayn mid is bedelaya.”
“Waxay cadaynaysaa Somaliland inay ku adag tahay,kuna dagaalamayso inay madax-banaanideeda hesho.balse ay diyaar u tahay wax wada qabsi iyo wixii mandaqadda maslaxad u ah iyo labada dalba in meel looga soo wada jeedsado, sida budhcad badeedda iyo wixii la mid ah,”ayuu yidhi intaas raaciyay Madaxweyne Axmed Siilaanyo.